Funny – Page2– Cele Channel
တခါတလေမှာ လူတွေရဲ့ လျှပ်တပြက်ပုံကို ရိုက်ကူးတဲ့အခါ အလွဲတွေ ကြုံရပါတယ်။ဒီလို အလွဲတွေက ရယ်စရာအလွန်ကောင်းပြီး ပိုင်ရှင်တွေကတော့ ရှက်ရွံ့သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ယောဂသင်တန်းကို သွားတဲ့အခါ စတော်ကင်လို ပေါ့ပါးပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာလွယ်ကူတဲ့ ဘောင်းဘီတွေ ဝတ်တတ်ပါတယ်။တကယ်တော့ ဒါဟာ သင့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုကို မှားယွင်းစေပါတယ်။ဒီလို ဘောင်းဘီတွေဟာ ခြေထောက်ဆန့်လိုက်တဲ့အခါ လေဟာနယ်အပေါက်ငယ်လေးတွေက ဘောင်းဘီသားကို ပါးလွှာအောင် ဆွဲဆန့်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ ပေါင်တွေကို အထင်းသားမြင်နိုင်ပါတယ်။ အိုလံပစ်ရဲ့ အလှခုန်ပွဲက ကင်မရာကောင်းချက်က မသိရင် ရှူးရှူးထွက်သွားတဲ့အတိုင်းပဲ။တကယ်က ချွေးတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်တာကိုတောင်မှ အီကြာကွေးမလွတ် ပေါက်စီမလွတ် အိပ်တာ။ အကပွဲတွေမှာ အဲ့ဒါတခု သတိထားစရာ။ကိုယ့်အတွင်းပိုင်းက လှနေရင် ပြဿနာမရှိပေမယ့် တခါတလေ အော့အော့ တွေဖြစ်ကုန်တတ်တယ်။ ယောင်္ကျားလေးပေမယ့် ကိုယ်ကိတ်တာပြဖို့ကျ ဒီလို ဘောင်းဘီလေးတွေ တက.ယ်လိုအပ်လိုတယ်။ […]
ဆယ်လီဘရစ်တီတော်တော်များများဟာ ကိုယ့်ပရိသတ်တွေက ဖြစ်စေ၊ Hater တွေကဖြစ်စေ သူတို့ ကို Troll တာ ၊ Meme လုပ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဆိုးကြလေ့မရှိသလို ဂရုလည်းမစိုက်ကြပေမဲ့ အခု Robert Van Impe ဆိုတဲ့ Digital Artist တစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ဝင်ပီပြင်တဲ့ Photoshop လက်စွမ်းတွေကြောင့် ပုံတွေ အွန်လိုင်းပေါ်ပျံ့ နှံ့ သွားတဲ့အခါမှာတော့ ပရိသတ်တွေပါမက ဆယ်လီဘရစ်တီတွေတော်တော်များများပါ အံ့အားသင့်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ပုံတွေဟာ ဘယ်လောက်တောင်ပီပြင်လွန်းပြီး ရယ်ချင်စရာကောင်းနေလဲဆိုတာ ကြည့်ုလိုက်ကြပါဦးနော်။ Ref : BoredPanda Myat Thu ( Momolay )
အောက်မှာတွေ့ရမယ့်ဓာတ်ပုံတွေကတော့ Oprah Winfrey ၊ Kylie Jenner နဲ့ Ariana Grande တိုိ့ကိုဖိုတိုရှော့နဲ့ ပြုပြင်ရာကနေ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအဖြစ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အသက်(၆၃)နှစ်ရှိတဲ့ Oprah ကဒီနေ့မှာတော့ Vanity Fair သတင်းခေါင်းကြီးတစ်ခုမှာ လက်(၃)ဖက်နဲ့တက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ တင်ပါးပေါ်မှာလက်တစ်ဖက် ၊ တစ်ဖက်က ပေါင်ပေါ်မှာရှိပြီး နောက်တစ်ဖက်ကတော့ Reese ရဲ့ခါးနားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ မျက်စိရှင်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေဟာ Big Little Lies စတားဖြစ်သူ အသက်(၄၁) နှစ်အရွယ် Reese ကို ထုတ်ဝေရေးကာဗာရိုက်တဲ့အခါမှာ ခြေထောက်သုံးချောင်းနဲ့ တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဒါကို Reese က Twitter မှာသူမအနေနဲ့ ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးက သူမခြေထောက်(၃)ချောင်းရှိနေတာကို တွေ့ရလိမ့်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ သူမကိုလက်ခံနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်း အရွှန်းဖောက်ထားပါတယ်။ သူမက Oprah ကိုလည်း သူမလို […]
ဘယ်လိုတွေတောင် ပါကင်ထိုးလိုက်တာလဲ ။ ဘယ်လိုတွေတောင် ကားပါကင်ထိုးလိုက်တာလဲ :3 ကားရပ်စရာနေရာမရှိတော့လို့ ! မသိဘူး တစ်ကားတည်းနေရာအကျယ်ကြီးယူမယ် :3 အိမ်း စကေးတွေ ! ကားရပ်စရာနေရာ ရှားလို့… အဲ့လိုပါကင်ထိုးနိုင်ဖို့ဆိုတာ တော်ရုံစကေးနဲ့မရဘူး… ဘယ်လိုတောင်လား… [email protected]
သူ့ရဲ့ရယ်စရာဟာသ ဗီဒီယိုက အင်တာနက်သုံးစွဲသူများကို ပျော်ရွှင်စေခဲ့ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေလည်း ကမ္ဘာပေါ်က အဖော်ရွေဆုံးလူသား စာရင်းထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့ဆီက တစ်ချို့ လူတွေရဲ့ဘ၀ဟာ ပင်ပန်းခက်ခဲဆင်းရဲပေမယ့် ဘယ်တော့မှ ပြုံးပျော်ရွှင်နေဖို့ကို မမေ့ဘူး။ စိတ်ချမ်းသာအောင်တော့နေကြတယ်။ ရေကြီးတဲ့အခါ ဆင်းရဲတဲ့ကလေးတွေအတွက် နေစရာဒုက္ခရောက်ပေမယ့် သူတို့ ရေထဲဆော့နေရတာပျော်တယ်။ ခက်ခဲနေချိန်မှာတောင် သူတို့ရှာကြံပြီး ပျော်အောင်နေတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ ၂၃ရက်နေ့တွင် ဖိလစ်ပိုင်က Mayon မီးတောင်ပေါက်ကွဲချိန်တွင် ဒေသခံလူဦးရေ ၂၇၀၀၀ လောက် လုံခြုံရေးအတွက် ပြောင်းရွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အားလုံးက မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သတင်းကောင်းကိုစောင့်နေချိန် လူတစ်ယောက်က အားလုံးရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေပပျောက်အောင် ရယ်စရာ ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဖေ့စ်ဘုတ် သုံးစွဲသူ Gary Bañaga က လျှပ်စစ်ပန်ကာတစ်လုံးကိုအသုံးပြုပြီး မီးခိုးမည်းတွေကို ပြန်မောင်းထုတ်နေတယ်။ ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ လုံခြုံရေးက စိတ်ချရပြီလို့ဆိုနိုင်တယ်။ အန္တရာယ်တစ်ခုကြုံတွေ့နေချိန်မှာတောင် […]
အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးအချို့က သူတို့အမျိုးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံ ငြီးငြူတတ်ကြပါတယ်။ ယောကျာ်းလုပ်သူရဲ့ ကလေးကလားအပြုအမူတွေကြောင့် အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ စိတ်ဆိုးရမလိုရီရမလိုဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ တချို့လည်း ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုထိန်းရတာဟာ ကလေးတစ်ယောက်ကိုထိန်းရသလိုပါပဲတဲ့။ အခုတွေ့ရမယ့် လင်မယားကိုကြည့်ရတာတော့မှန်နေသယောင်ပါပဲ။ အွန်လိုင်းပေါ်ကဗီဒီယိုတစ်ခုမှာ အမျိုးသားက ဟင်းချက်ဇွန်းခွက်ကိုယူပြီး ဆော့နေတာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဇွန်းကိုမိန်းမဖြစ်သူက လိုက်ရှာနေတာသူမသိပါဘူး။ ဓာတ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း သူက ခပ်ဝိုင်းဝိုင်းသဏ္ဍာန် ငွေရောင်အရာလိုတစ်ခုကို လေထဲမှာမြောက်နေတဲ့ပုံစံ ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ပြနေပါတယ်။ သူ့နောက်မှာတော့ မိန်းမဖြစ်သူက ဟင်းချက်ဇွန်းကို လိုက်ရှာရင်းအလုပ်များနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အမျိုးသားဖြစ်သူရဲ့ မှော်ပညာအစွမ်းပြထားတဲ့မျက်လှည့်က ကြာကြာမခံလိုက်ပါဘူး။ မိန်းမဖြစ်သူက သူကစားနေတဲ့ပစ္စည်းဟာ ဟင်းချက်ဇွန်းမှန်းရိပ်မိသွားကာ ဟင်းချက်အိုးနဲ့ခေါင်းကို တီးချလိုက်တာကို ပုံမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြင်ရတဲ့အတိုင်း ကြိုးစားပမ်းစားနဲ့ မျက်လှည့်ပြနေတဲ့ အမျိုးသားဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဇနီးသည်ကြောင့် ပွဲလေးပျက်စီးသွားရရှာပါတယ်။ တကယ်တော့ လေထဲမှာမြောက်တက်နေခဲ့တဲ့ ငွေရောင်အ၀ိုင်းလေးဟာ ဇွန်းခွက်ခေါင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လင်းလင်း (ShweMom)
Posted on January 26, 2018 January 26, 2018 Author Myo Min Htet	Comment(0)
အင်စတာဂရမ်က ဘရာဇီးမော်ဒယ်တွေ အားလပ်ရက် အပန်းဖြေအနားယူနေပုံတွေအတိုင်း ယောယျာ်းတစ်သိုက်က လိုက်အတုယူပြီး ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြည့်တဲ့အခါ ထိုမော်ဒယ်တွေထက် အင်တာနက်မှာ နာမည်ကြီးသွားတယ်ဆိုတာ မင်းယုံပါ့မလား … ။ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး ခွီလိုက်ပါဦး ! လက်ကလေးနှစ်ချောင်းထောင်ပြီး အပေါ်ကိုမြှောက် ဘယ်လိုလဲ.. လှလား အနောက်က တောင်တန်းကြီး ခမ်းနားရဲ့လား… ? ရေမြေသဘာဝအလှကို ခံစား ကမ်းခြေမှာ ဒီလိုလေး ရိုက်ချင်တာ ရေသူထီးကွ… ဟဟ cutie စတိုင်လ်လေးဖမ်းဖို့ ပါဝင်နဲ့ ကော်ဖီခွက်လေး တစ်ခွက်လိုတယ်… Bachelorette party ဆိုလားပဲ… ပို့စ်ပေးကြမ်း… Sweet ဖြစ်ရဲ့ လား ? :3 xD [email protected]
Posted on January 25, 2018 Author Myo Min Htet	Comment(0)
လူဆိုတာ အသံထွက်ရယ်နိုင်မောနိုင်တဲ့ အဆင့်မြင့်ဆုံးသတ္တဝါတွေ ဖြစ်သည့်အလျှောက် ရယ်ခြင်းမောခြင်းဟာ လူသားတွေအတွက်လည်း အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်။ ရယ်မောခြင်းကြောင့် စိတ်ဖိအားတွေ၊ စိတ်ရောဂါတွေ၊ စိတ်ထဲက အနာတရတွေကို ကင်းပျောက်စေပါတယ်။ ဒီတော့ အောက်မှာ The Sun ကနေ စုစည်းဖော်ပြပေးထားတဲ့ လေဆိပ်က ရယ်စရာဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းလေးတွေကြည့်ပြီး ပရိသတ်ကြီး ရယ်စရာရှိတာလေးတွေဆက်ပြီး ရယ်ကြရအောင်ပါ။ (၁) ဖွားသီလလည်း လုံခြုံရေးအရဆိုတော့ (၂) မသိဘူး အိပ်မယ် – ၁ (၃) လူပါ စစ်တယ် (၄) မခွဲမခွာ (၅) ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရာဝယ် (၆) မသိဘူး အိပ်မယ် – ၂ (၇) ဘာမှ မပါပါဘူးဗျာ (၈) ချမ်းလို့ (၉) နားနေခန်းဆို နောက်ပြန်လှည့်ပါ (၁၀) King of Metal ကြီး Metal Detector နဲ့တွေ့တော့ (၁၁) […]
Posted on January 21, 2018 Author Myo Min Htet	Comment(0)
Posted on January 18, 2018 January 18, 2018 Author Myo Min Htet	Comment(0)
ကားကုမ္ပဏီကိုကားဓာတ်ပုံတွေအစား Selfie ပုံတွေပို့ပေးခဲ့လို့ရယ်စရာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီး
မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ကားအာမခံထဲသူမကားပါထပ်တိုးအာမခံထားရင်း ပိုက်ဆံချွေတာလိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ကားအာမခံကုမ္ပဏီကအေးဂျင့်ပြောတဲ့စကားကို နားလည်မှုလွဲခဲ့တဲ့ရယ်စရာအဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ပုံကတော့ အေးဂျင့်ကအာမခံထားမယ့်ကားရဲ့ဓာတ်ပုံတွေတောင်းခဲ့တာကို သူမကသူမဓာတ်ပုံလေးတွေပို့ပေးခဲ့တာပါ။ အသက်(၂၅)နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Alyssa Stringfellow က သူမရဲ့ကားပါထပ်ပေါင်းပြီးမိခင်ရဲ့အာမခံကြေးကိုထပ်မံချဲ့ထွင်လိုတာကြောင့် အေးဂျင့်ထံအကူအညီတောင်းရာမှ အေးဂျင့်ကသဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အေးဂျင့်က သူမရဲ့နာမည်အပြည့်အစုံ၊ မွေးသက္ကရာဇ် ၊ ကားမောင်းလိုင်စင်တွေနဲ့အတူ တည့်တည့်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ၊ ဘေးစောင်းရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပါထည့်ပေးပါဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ အေးဂျင့်က ရှေ့တည့်တည့်ကရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ ဘေးစောင်းပုံလိုချင်တယ်ပြောတာကြောင့် Alyssa နဲ့မိခင်ဖြစ်သူက အံ့သြနေကြပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ရဲစခန်းမှာရောက်နေတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ ဘာကြောင့် အေးဂျင့်ကသူမရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလိုချင်နေရသလဲဆိုတာ သားအမိနှစ်ယောက်ကတွေးတောခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲအေးဂျင့်လိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ခဲ့ပြီး အဲဒီညမှာပဲအေးဂျင့်ဆီအီးမေးလ်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ညမှာတော့ အဆိုပါအေးဂျင့်အမျိုးသားဆီကနေ သူမကပြန်စာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြန်စာထဲမှာတော့ သူမဓာတ်ပုံတောင်းတာမဟုတ်ပဲ ကားဓာတ်ပုံကိုတောင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Alyssa ဟာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှက်ရွံ့ခဲ့ပေမယ့် အေးဂျင့်ဆီကိုသူမကားဓာတ်ပုံလေးတွေကိုပြန်ပို့ခဲ့ပြီး သူမအဖြစ်အပျက်ကို ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ post မှာတော့ ရှက်စရာကောင်းပြီး အူကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့သူမအဖြစ်အပျက်ကို ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ သူများတွေကိုအသိပေးသင့်မပေးသင့် စဉ်းစားခဲ့ရကြောင်းနဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒီလောက်ရယ်ရတဲ့ဟာကို […]
Posted on January 16, 2018 Author Myo Min Htet	Comment(0)